Ubumnyama nokuntwela kokusa, i-prequel ekudala ilindelwe yezinsika zomhlaba | Izincwadi Zamanje
Ubumnyama nokusa (2020) uyisandulela se-trilogy eyaziwayo yamanoveli omlando Izinsika zomhlaba, eyakhiwe nguKen Follet. Kuyi-saga eyaqalwa ngo-1989 ngumbhali wase-Welsh ngokwethulwa kwe- Izinsika Zomhlaba (Isihloko sesiNgisi). Kamuva, ukushicilelwa kwe- Umhlaba ongapheli (2007) futhi Ikholomu yomlilo (2017).
Izincwadi ezimbili zokuqala zochungechunge ngaphezulu Ubumnyama nokusa yenzeke eKingsbridge, idolobha eliqanjiwe eNgilandi. Isitolimende sokuqala sisethwe ngekhulu le-997, okwesibili ngekhulu le-VIV ne-prequel ngo-XNUMX. Ngakolunye uhlangothi, Ikholomu yomlilo igxila empini engokwenkolo eyashaqisa iYurophu ngekhulu le-XNUMX.
1 Isakhiwo nabalingiswa bobumnyama noDawn
1.1 Abalingiswa ebumnyameni naseDawn, ngokusho kukaKen Follet
1.1.4 UMbhishobhi Wystan
2 Imibono ngomsebenzi
3 Mayelana nomlobi, uKen Follet
3.1 Imishado nomsebenzi wezepolitiki
3.2 Ukuqala komsebenzi wakhe wokubhala
3.3 Inkanyezi yemakethe yokushicilela
4 Isitayela samanoveli omlando kaKen Follet
4.0.1 I-Century Trilogy
Isakhiwo nezinhlamvu ze Ubumnyama nokusa
Isenzo de Kusihlwa nasekuseni uyagijima ezinsukwini ezintathu zonyaka 997, ngokugcwele Iminyaka Emnyama eBrithani. Ngaleso sikhathi, leyo nsimu yayihlala ivinjezelwe ukuhlasela kolwandle kwamaViking kanye nokuhlaselwa komhlaba kwamaWelsh.
Isakhiwo ifaka izinhlamvu ezintathu eziyinhloko: indela, intombazane yaseNorman omusha eNgilandi nomyeni wakhe nomakhi wesikebhe. Bahlangana eKingsbridge, lapho kumele babhekane nombhishobhi ohahayo inhloso yakhe kuphela ukukhulisa amandla akhe.
Izinhlamvu ze Ubumnyama nokusa, ngokusho kukaKen Follet
Umbhali ushilo ezingxoxweni ezahlukahlukene ukuthi uRagna ungumlingiswa wakhe amthandayo. Her Uyindlovukazi enhle futhi ehlakaniphile kaNorman onomoya oqinile, ushade nendoda engenalo igazi elihle. Ngaphandle kwemvume yabazali bakhe, owesifazane osemusha unquma ukuya nomyeni wakhe eNgilandi. Kepha, lapho befika lapho, uthola ukuthi izinto azinjani njengoba ayecabanga.
Ungumkhiqizi wezikebhe waseNgilandi onekhono, othandana noRagna. Kepha njengoba engowesifazane oshadile, impela kungukukhanga okungenangqondo. Ngaphandle kothando lwakhe olungathandeki, u-Edgar akayifuni induduzo komunye wesifazane futhi uyaqhubeka nokulinda ithuba lakhe nenkosazana.
Ungumbusi onomsebenzi wokufuna ukuvelela: ukuguqula i-abbey yakhe ibe yisikhungo semfundo esithandwayo kulo lonke elaseYurophu. Ngokwalesi sizathu, Iphrojekthi yakhe yokuphila igxile ekwakheni indlunkulu yesikole sakhe samaphupho ngomtapo wolwazi waso kanye nomshini wokunyathelisa.
UFollet umchaza “njengomunye wabantu abakhohlakele kunabo bonke engake ngababumba… Uzomzonda kakhulu kangangokuthi uzomfisela isiphetho esibi kakhulu ”. Ngakho-ke, uyindoda engathembekile, ekhohlisayo, abahahayo, abazicabangela bona bodwa futhi abanalo nolunye uphawu lomusa. Ngakho-ke, inhloso kuphela kaWystan ukukhulisa amandla akhe nawomndeni wakhe noma ngabe uthatha bani phambi kwakhe, noma kanjani.
Njengakuwo wonke amanoveli omlando kaFollet, abagxeki nezethameli zishayela ihlombe - cishe ngazwi linye - amandla okuxhuma encwadi. Ngokwengeziwe, imibhalo ehlaba umxhwele etholwe ngumbhali iyabonakala ngenxa yezincazelo eziningiliziwe zendwangu yezombusazwe namasiko angaleso sikhathi.
Amazwi ambalwa aphikisayo akhononda ngokulandisa okungahambi kahle kwabesifazane, ilayishwe (kucatshangwa) ngezingxenye zokuhlukunyezwa ezingabalulekile kumphumela. Ngokuphambene nalokho, okunye ukubuyekezwa kuchaza ukuthi ngokunembile lezo zindatshana ezingahlanjululwanga nezegazi zimelela kakhulu isikhathi lapho umbhalo usethwe khona. Kwakuyisikhathi esinzima kakhulu.
Mayelana nomlobi, uKen Follet
UKenneth Martin Follet wazalelwa eCardiff, eWales, e-United Kingdom; ngoJuni 5, 1949. Ngesikhathi esengumntwana waqala ukuthanda kakhulu ukufunda ngoba abazali bakhe, abangamaKrestu asebenzayo, bamenqabela ukubuka ithelevishini nokuya kumabhayisikobho. Yena nomndeni wakhe bathuthela London Lapho ngineminyaka eyishumi. Lapho wabhalisa e-University College yaseLondon ngo-1967 ukuyofundela ifilosofi.
Lapho ngiphothula iziqu ngo-1970, wenza izifundo zobuntatheli futhi waqala ukusebenzela i ISouth Wales Echo edolobheni langakubo. Ekuqaleni kuka-1974 waya Evening Standard eLondon, nokho, wagcina engagculisekile ngomsebenzi wokubika. Ngalesi sizathu, uFollet ungene ezweni lokushicilela ku- Izincwadi ze-Everest futhi waqala ukubhala izindaba zakhe zokuqala ngasekupheleni kweminyaka yama-70.
Imishado nomsebenzi wezepolitiki
Ngo-1968, uFollet washada noMary, owayefunda naye ekolishi eLondon ahlala naye isikhathi esingaphansi kweminyaka eyishumi. Kamuva, ngo-1984 washada noBarbara Hubbard (igama lentombi), oyilungu leLabour Party, inhlangano uFollet ahlotshaniswa nayo kusukela ngo-1970.
Ukuqala komsebenzi wakhe wokubhala
Ngawo-1970, UFollet ushicilele izincwadi eziyisishiyagalolunye ngaphansi kwamabizo-mbumbulu uSimon Myles, uMartin Martinsen, uBernard L Ross noZachary Stone. Ku-1978, Isiqhingi seziphepho —Isayinwe negama lakhe langempela - kwakuyisikhathi sokuqala komsebenzi wakhe emhlabeni jikelele. Eminyakeni eyishumi nanye kamuva, incwadi yakhishwa eyayenza yathengiswa kakhulu emhlabeni: Izinsika zomhlaba.
Inkanyezi yemakethe yokushicilela
Ngaphandle kwamanoveli omlando, UFollet uphawulwe ngezindaba zakhe ezisolisayo. Ngaphakathi kwale subgenus yokugcina, Ukhiye ukuRebecca (1982), Izimpiko zokhozi (1983), IsiGodi Samabhubesi (1986) futhi Iwele lesithathu (1997), ngezinye zezincwadi zakhe ezaziwa kakhulu. Eqinisweni, bonke banokuguquguquka kwefilimu nethelevishini, kanye ne- Ingcuphe enkulu (2001) futhi EMhlophe (2004).
Isitayela samanoveli omlando kaKen Follet
Amanoveli omlando yombhali waseBrithani banezici zemeta-fiction noma umlando oqanjiwe, njengoba befaka ama-protagonists athathwe emcabangweni wabo. Yize kunjalo, abagxeki abaningi bemibhalo bancome ukwethembeka kukaFollet ezenzakalweni eziyiqiniso (ezilandiswa ngabalingiswa abaqanjiwe). Ngokufanayo, ngokuvamile banakho izincazelo ezinemininingwane eminingi futhi ube banzi impela.
Ngaphandle kwenani elikhulu lamakhasi (futhi ikhona ku- Ubumnyama nokusa) Izindaba zikaFollet zikhiqiza ukuzibandakanya okuningi kubafundi. Lezi zici zesitayela zingabonakala ezigidini ezimbili ezidume kakhulu zombhali weCardifian: Izinsika zomhlaba y Ikhulu leminyaka.
I-Trilogy ye- Ikhulu leminyaka
Le trilogy ngezibalo ezithengiswa kakhulu kuzungeze imicimbi efanelekile yekhulu lama-XNUMX. Uchungechunge luqala ngemicimbi ehlobene neMpi Enkulu nesinqumo se-Prohibition e-United States (Ukuwa kwemidondoshiya, 2010). Ngemuva kwalokho Ubusika bomhlaba (2012), igxile eMpini Yesibili Yomhlaba ngenkathi Umbundu waphakade (2014) ihlanganisa cishe yonke iMpi Yomshoshaphansi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-Novela » Ubumnyama nokusa